What causes constipation (၀မ်းချုပ်ခြင်း) | Moe Naymin
What causes constipation (၀မ်းချုပ်ခြင်း)
၀မ်းကို ၃ ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်မျှ မသွားလျှင် ၀မ်းချုပ်သည်ဟု အကြမ်းမျဉ်းသက်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းဟု ခေါ်ရာတွင် ပုံမှန်သွားနေသော ၀မ်းထက်လျော့နည်း၍သွားခြင်း၊ ၀မ်းသွားသောအခါတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားခါနီး နာကျင်ခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ ဗိုက်ပြည့်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားလျှင်သွေးအနည်းငယ်သွားခြင်း စသည်များပါဝင်ပါသည်။
၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးရန် အောက်ပါအစားအစာများကို စားသုံးသင့်ပါသည်။
ပဲများဟာ အမျှင်ဓာတ်ပါသော မည်သည့်အစားအစာများထက်မဆို အရွယ်တူပမာဏအချင်းချင်း အမျှင်ဓါတ် ၁၀ ဂရမ်ပိုမိုပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော ပဲကို ရွေး၍စားသုံးနိုင်ပါသည်။
သာမာန်အရွယ်အစားရှိသော ကီဝီသီးတစ်လုံးတွင် အမျှင်ဓါတ် ၂.၅ ဂရမ် ဗီတာမင်အမြောက်အများနှင့် အခြားအဟာရများ အများအပြားပါဝင်ပါသည်။ ကီဝီသီးသည် ဘယ်ရီမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး အလုံးလိုက်စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကအစားအစာလေ့လာရေးဌာနက တွေ့ရှိချက်အရ ကီဝီသီးပုံမှန်စားလျင် အူများ၏လှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အပံ့ပေးသည်ဟု တွေ့ရှိရပါသည်။ မကြာသေးမီက ထိုင်ပင်၏လေ့လာချက်အရ ကီဝီသီးတစ်နေ့နှစ်လုံးစားလျှင် အူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အလျင်အမြန်တိုးတက်လာသည်ဟု တွေ့ရှိရပါသည်။
ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိသော မီးဖုတ်ထားသော ကန်စွန်းဥတစ်ခုတွင် အမျှင် ၃.၈ ဂရမ် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုပါဝင်သော အမျှင်ဓါတ်သည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါသည်။ ကန်စွန်းဥ၏အခွံတွင် အမျှင်ဓါတ်များစွာပါဝင်ခြင်းကြောင့် ကန်စွန်းဥစားလျှင် အခွံပါစားသုံးရပါမည်။
ပေါက်ပေါက်သည် သွားရေစာများအနက် အမျှင်ဓါတ်များစွာပါဝင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သာမာန်ပေါက်ပေါက်ဗူး ၃ ခုတွင် အမျှင်ဓါတ် ၃.၅ ဂရမ်ပါဝင်ပြီး ၁၀၀ ကယ်လိုရီပါဝင်ပါသည်။
၅။ အစေ့များနှင့် အခွံမာအသီးများ
အစေ့အဆံ အခွံမာသီးများသည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ သက်သာလျော့နည်းစေပါသည်။
၆။ ဂျုံထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်
ပေါင်မုန့်များသည် အမျှင်ဓါတ်အမြောက်အများပါဝင်ခြင်းကြောင့် အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှုနှင့် နှလုံးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ပေါင်မုန့်ထဲတွင် ပါဝင်သော Arabinoxylan သည် အူအတွင်းတွင် အစာများပုံမှန်လှုပ်ရှားနိုင်အောင် ကူညီပေးပါသည်။ Ezekiel ဓါတ်အမြောက်အများနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်သည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သိသာစွာ သက်သာစေပါသည်။
၇။ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီးများ
ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိသော သစ်တော်သီးတစ်လုံးကို အခွံမခွာဘဲစားသုံးလျှင် အမျှင်ဓါတ် ၅ ဂရမ်မှ ၆ ဂရမ်အထိ ရရှိပြီး အစာခြေဖျက်ခြင်းကို မှန်ကန်စေပါသည်။ ၀မ်းချုပ်သူများအတွက်လည်း သစ်တော်သီး၊ ပန်းသီးများသည် အထူးကောင်းမွန်သော အစားအစာများဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ရီမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်သော ရပ်စ်ဘယ်ရီ ၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီသီးများသည်အမျှင်ဓါတ်အများအပြားပါဝင်သောကြောင့် အရသာရှိပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ဖန်ခွက်တစ်ဝက်ခန့်သာရှိသော ရပ်စ်ဘယ်ရီသီးများတွင် အမျှင်ဓါတ် ၄ ဂရမ်ပါဝင်သောကြောင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို အထူးကောင်းမွန်စေပါသည်။
အသီးခြောက်များသည် အမျှင်ဓါတ်အများအပြားပါဝင်ခြင်းကြောင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ ထိုအသီးခြောက်များကို ရေစိမ်၍ဖြစ်စေ၊ အစားအစာတစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ တွဲဖက်စားသုံးပါလျင် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အသီးခြောက်များသည် လက်ဆက်သော ပုံမှန်အသီးများထက် အမျှင်ဓါတ်နှင့် ကယ်လိုရီများစွာပါဝင်ပါသည်။
အမေရိကန် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန် Gerard Isenberg ၏ ပြောကြားချက်အရ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်သော အစားအစာများကို လုံလောက်စွာမစားသုံးခြင်းကြောင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ချိစ်၊ ရေခဲမုန့်နှင့် အခြားနို့ထွက်ပစ္စည်းများက ၀မ်းချုပ်စေတတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဆီဓါတ်များ များစွာပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓါတ် အနည်းငယ်သာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို စားသုံးမည့်အစား အသီးများကို စားသုံးသင့်ပါသည်။
၂။ အနီရောင်များသော အသားများ
အနီရောင်များသော အသားများ သီးသန့်စားလျင် ၀မ်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ထိုအစားအစာများသည် အမျှင်ဓါတ်များစွာ ပါဝင်သော အစားအစာများနှင့် တွဲစားလျင် ၄င်းထဲတွင်ရှိသော အမျှင်ဓါတ်များကို အစားထိုးဖယ်ရှားလိုက်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော အစားအစာများသည် အစာစားသုံးရန်အတွက် အဆင်ပြေသော်လည်း အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး အဆီဓါတ်ပါဝင်မှုများခြင်းနှင့် ဆိုဒီယမ်ဓါတ်ပါဝင်မှုများခြင်းကြောင့် အစာချေမှုနှေးကွေးစေပြီး အူမကြီးအတွင်းမှ ရေများကို စုပ်ယူမှုအားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၀မ်းချုပ်စေပါသည်။
၄။ အဆင့်သင့်ပြုလုပ်ထားသော အာလူး
အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသော အာလူးကြော်များသည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အာလူးတွင် အဆီများ အမြောက်အများပါဝင်ပြီး အစာချေခြင်းကို နှေးကွေးစေသည်သာမက ၀မ်းချုပ်ခြင်းကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ထူးဆန်းစွာပဲ ငှက်ပျောသီးသည် သူ၏မှည့်ခြင်းမမှည့်ခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး ၀မ်းသွားစေခြင်း၊ ၀မ်းချုပ်စေခြင်း ဂုဏ်သတ္တိ နှစ်မျိုးစလုံးပါရှိပါသည်။ မမှည့်သော ငှက်ပျောသီးသည် ၀မ်းချုပ်စေပြီး ၊ မှည့်သော ငှက်ပျောသီးသည် ၀မ်းမှန်စေပါသည်။
အာလူးကြော်များ၊ ဒိုးနပ်များ၊ ငါးများ၊ စသည်တို့သည် အစာအိမ်ထဲတွင် နှေးကွေးစွာရွေ့လျားပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
အစားအစာနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ-ရေများများသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ အစာပုံမှန်စားခြင်းတို့က ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။
၁။ အမျှင်ပါသော အသီးအနှံများများစားပါ။
၂။ ရေ (သို့) ဖျော်ရည်များများသောက်ပါ။
၃။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုကို တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်ပြုလုပ်ပါ။
၄။ သင့်ကိုယ်သင်အားလက်ချိန်ပေးပြီး နားနားနေနေထိုင်ပေးပါ။ ဥပမာ - အိမ်သာတတ်လျင် လိုအပ်သောအချိန်ကို လုံလုံလောက်လောက်ပေးပါ။
၅။ ၀မ်းနှုတ်ဆေးများ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကို မသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
များသောအားဖြင့် Polyethylene glycol (MiraLAX) ကို ကလေးများနှင့်လူကြီးများတွင် ယာယီဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ Lubiprostone (Amitiza) နှင့် linaclotide (Linzess) ကို အသက်ကြီးသော လူကြီးများတွင် ရေရှည်ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။
၀မ်းပိတ်နေခြင်းသည် အသက်ကြီးသူများနှင့်ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများတွင် ဒုက္ခအပေးဆုံးရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျင် ဆရာဝန်များက လူနာ၏စအိုထဲကို လက်ထိုးထည့်ပြီး စမျဉ်းတုံးဖယ်ခြင်း (သို့) ၀မ်းချူဘောလုံးထည့်ခြင်း (သို့) ရေနွေးအသုံးပြုခြင်း (သို့) သဘာဝချောဆီအသုံးပြုခြင်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။
ရေးသားသူ - ဒေါက်တာမိုးနေမင်း
Suggested Foods to relieve constipation
Beans have more than 10 grams of fiber per cup serving that's more than almost any other fiber source. Beans haveagreat mixture of soluble and insoluble fiber, both of which helps the food keep moving through the intestines.
The luscious green flesh of the kiwi may be just what the doctor ordered. One medium kiwi has about 2.5 grams of fiber and lots of vitamins and nutrients that are important for good health, including the intestines.
One medium baked sweet potato with skin has 3.8 grams of fiber, which can help get things moving along. This high fiber content in sweet potatoes helps prevent constipation. The skin contains most of the fiber so leave it on for the biggest benefits.
Seeds are another good fiber-filled choice. A scant 1 tablespoon of sesame seeds contains 1.1 g fiber, while 1 ounce of pumpkin seeds (about 85 seeds) hasawhopping5g fiber. Sprinkle seeds on top of salads for added fiber and crunch.
Just be careful to stay away from movie theater popcorn or popcorn laden with butter as the high fat content not only contains lots of calories, the fat can cause constipation.
Researchers at the University of Finland in Helsinki found whole grain rye bread to be better than wheat bread and laxatives for relieving constipation. They reported their findings in the Journal of Nutrition in 2010. Their subjects ate enough slices (12.3 grams each) to get 30 grams of fiberaday. But you don't have to eat that much for it to work.
7.Pears, plums, and apples
Berries are tasty, easy to eat so take your pick: raspberries, blackberries, blueberries, and strawberries - all are easy to snack on and full of fiber.
For example just ½ cup of raspberries contains4g fiber to help relieve constipation.
The cause of constipation may be as close as your dinner plate. Many of the common foods in the American diet can lead to constipation. According to Gerard Isenberg, MD, associate chief of gastroenterology at University Hospitals Case Medical Center and associate professor at Case Western Reserve University in Cleveland, the key similarity between these foods is their lack of fiber. "It is unusual for any one specific food to cause constipation," he says. "What is important in the diet is fiber. The American Dietetic Association recommends that Americans get 20 to 35 grams of fiberaday from plant foods, including both soluble and insoluble fiber. However, most Americans get only half this amount."
Cheese, ice cream, and other dairy products haveareputation of being "binding" or constipating foods. As it turns out, this reputation is well deserved. Mark Spielmann, RD, nutrition manager at La Rabida Children's Hospital in Chicago, says it's due to the high-fat and low-fiber content of many of these products. Dairy products made from milk can cause constipation in many individuals, particularly toddlers, he says. "To prevent constipation, try fruit sherbets instead."
Though red meat by itself isn'taspecific cause of constipation, the problem is that red meat takes the place of fiber-rich options in our diet when it's consumed regularly. "Several servings of red meat per week may lead toabacked-up feeling," Dr. Spielmann says. Instead of adding more foods that cause constipation to your meal, make sure that your steak comes with plenty of fiber-rich foods, likeabaked potato (eat the skin) andalarge salad for constipation relief.
These meals inabox may be convenient, but they rarely have the nutritional merits ofameal you prepare yourself, which puts them on the list of foods that can cause constipation. "Frozen dinners are almost always low in fiber and often high in fat," says Tammy Lakatos, RD, CDN, CPT,aregistered dietitian and certified personal trainer in New York and one-half of the duo known as the Nutrition Twins. "Also, they are usually high in sodium, which ties up water to dilute the salt, keeping it from pushing waste through the body." Keep these constipating foods toaminimum.
Interestingly, bananas can either beacause of constipation orasource of constipation relief, depending on their ripeness. "Unripened, green bananas are constipating," says Tammy Lakatos. "But ripe bananas are very high in soluble fiber, which in some cases can help to push waste through the bowels, so bananas can also be helpful in eliminating constipation issues." For constipation relief, be sure to pick bananas that are good and ripe.
Greasy, fried foods, such as french fries, doughnuts, onion rings, and even heavily breaded good foods like fish, haveatendency to slow movement through your digestive tract. These types of foods can bind you up and beacause of constipation. "Just like potato chips, other deep-fried foods are greasy and takealong time to digest," says Spielmann. "This can slow your normal gastrointestinal movement." Choose cooking methods such as steaming and broiling instead for constipation relief.
Consult your doctor before taking laxatives: Taking laxatives on your own foraperiod of time will get your digestive system used to them. This will lead to you not being able to have bowel movements naturally, when you stop taking the pills. So whenever you haveasignificant or prolonged change in bowel habits, check with your doctor. Polyethylene glycol (MiraLAX) is available over the counter for short-term use for constipation in children and adults. Lubiprostone (Amitiza) and linaclotide (Linzess) are prescription drugs for long-term use in chronic constipation in adults and the elderly.